Su'aasha 118 ee Critical Channel Istanbul ee ka socota CHPli Tanrıkulu | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSu'aalaha 118 Critical Channel Istanbul Su'aalaha ka socda CHPli Tanrıkulu
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Sharaxaada IMM ee Borotokoolka Wadaal ee Istanbul
Xisbiga Jamhuuriga ee Istanbul Kuxigeenka Atty. Sezgin Tanrikulu, Channel Istanbul soo bandhigay hindisaha oo ka kooban 118 Pojesi su'aalo muhiim ah oo ku saabsan Grand National Assembly ee Turkey.
Kumaan kun oo muwaadin oo kamid ah mashruuca Kanal Istanbul ayaa diiday diidmo ay ka qabaan qaab dhismeedka sharciga in ay u horseedi doonaan waxyeelo aan laga badali karin dabiiciga.
Nidaamka diidmada ee warbixinta EIA ee Kanal Istanbul, oo billowday 25-ka Diseembar, waa la dhammeystirey, iyo in kasta oo qabowgu jiro, dadka deggan Istanbul waxay u duuleen Waaxda Gobolka ee Istanbul iyo Urbanization ee Balmumcu 10 maalmood waxayna ku wareejiyeen 100 kun oo codsi agaasime.
Sezgin Tanrıkulu oo ka tirsan xisbiga CHP ayaa isna ku sheegay soo jeedintiisa in miisaaniyadda loo qoondeeyay ay u dhigantaa $ 12 bilyan 626 milyan marka la xisaabiyo sicirka sarrifka maanta. Soo bandhigista rasmiga ah ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ee la diyaariyay sanadka 2018, waxaa lagu sheegay in wadarta guud ee Kanal Istanbul ay ku kici doonto 20 bilyan oo doolar .. Bogagga 40-aad ee 37-ka bog ee la soo bandhigay, “wadarta qodista, gaadiidka iyo kaydinta: 10 bilyan doolar, daboolida, furitaanka, dhulka. Waxa ku jira soo jeedinta ayaa ah xogta dhaqancelinta, biyo-mareennada, tuugooyinka gurmadka deg degga ah, tas-hiilaadka iwm.: $ 5 bilyan, wadarta kharashaadka dhismaha kanaalka: $ 15 bilyan, barakac kaabayaasha iyo nidaamyada gaadiidka: $ 5 bilyan.
Su'aalaha CHP Istanbul ku xigeenka Sezgin Tanrıkulu waa sida soo socota:
1. Immisa muwaadiniinteena ah ayaa la noolaan kara qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
2. Immisa mashruuc oo KOSGEB ah ayaa lagu taageeri karaa qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
3. Immisa arday ayaa heli kara deynta waxbarashadooda iyada oo lagu qiimeynayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
4. Immisa arday ayaa la siin karaa deeq waxbarasho iyada oo qiimaha maalgashiga Mashruuca Kanal Istanbul?
5. Markaan tixgalinayno in heerka shaqo la aanta dadka dhalinyarada ah uu yahay 4,5 boqolkiiba iyada oo korodhka 26,1-ka ah, ee kooxda da’da 15-64, sicirkani waa 2,4 boqolkiiba iyada oo ay kordhay 14,1 dhibcood, iyo imisa muwaadin ayaa samayn kara maalgashi baabi'in kara dhibaatada shaqo la’aanta?
6. Immisa tuulo ayaa lagu dhisi karaa shabakad biyo-cabitaan ah iyadoo ay ku kacayso kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
7. Immisa tuulo ayaa lagu gaari karaa wadada wasakhda ah iyada oo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul uu noqon karo waddo gogoldhaaf ah?
8. Immisa ubax baraf iyo ubaxa wadooyinka ayaa laga iibsan karaa si loogu isticmaalo xeryaheena, tuulooyinka, degmooyinka iyo gobollada wadooyinkooda ay u xiran yihiin sababta oo ah qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo baraf culus?
9. Immisa 4 × 4 ambalaas ambalaas ayaa loo qaadi karaa safarka xirfadleyda daryeelka caafimaad ee degdegga ah bukaannada jooga jidadka barafka daboolay iyadoo la raacayo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
10. Immisa iskuul ayaa lagu dhisi karaa iyadoo la maalgelinaayo qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
11. Immisa macallimiin ah oo sugaya in la magacaabo iyada oo lagu maalgelinayo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa la bilaabi karaa inay shaqeyso?
12. Immisa macallin oo naafo ah oo sugaya in loo magacaabo iyada oo lagu maalgelinayo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa bilaabi kara inay shaqeeyaan?
13. Immisa qof oo doonaya inay isguursadaan iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa heli kara kaalmada guurka?
14. Immisa kamid ah muwaadiniinta 'GSS' ayaa lagu bixin karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
15. Immisa muwaadiniin ayaa heli kara SMA oo bilaash ah qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
16. Immisa Dambiyood ayaa lagu dhisi karaa iyada oo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
17. Immisa cosbitaalo dowladeed ayaa la dhisi karaa, oo ay ku jiraan qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo qalabka gudaha?
18. Immisa muwaadiniin ah, kuwaas oo sugaya ballanta qeybta caafimaadka, oo leh qiimaha maal gashiga Mashruuca Canal Istanbul ayaa la hubin karaa inay bilaabaan?
19. Immisa Beeraley ah baa la siin karaa taageero cagaf iyadoo 50% deeqo ah laga helayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
20. Immisa beeralleey ah (10 kasta) ayaa lagu siin karaa lo'da caanaha qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
21. Iyada oo sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, imisa beeralleey ah (10 midkiiba) ayaa la siin karaa maroodi ku saabsan taranka?
22. Immisa qof oo dhalinyaro ah ayaa heli kara 6-bilood koorsooyin afafka qalaad ah oo loogu talagalay barashada afafka qalaad iyadoo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
23. Immisa R&D iyo xarumo horumarineed tikniyoolajiyadeed ayaa lagu dhisi karaa iyadoo la maalgalinayo sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
24. Imisa dekedaha bada ayaa lagu dhisi karaa qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
25. Immisa haween ah ayaa laga shaqaysan karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
26. Immisa dab-damiyaasha dabka lagu iibsan karaa iyadoo lagu qiimeeyo qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
27. Immisa muwaadiniin naafo ah ayaa loo magacaabi karaa shacbiga iyadoo ay ku kacayso kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
28. Immisa arday ayaa ka faa'iideysan kara xisaabaadka jaamacadda oo lacag la’aan ah iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
29. Iyada oo sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, imisa arday jaamacad ah ayaa loo qaybin karaa kaar ay isku dheelitirnaan yihiin 1000 TL sanadkii si loogu isticmaalo howlaha dhaqanka iyo fanka?
30. Immisa warshadood oo tamarta qorraxda ah ayaa lagu dhisi karaa iyada oo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
31. Immisa marawaxadaha dabaysha ah ayaa lagu rakibi karaa iyada oo lagu maalgalinayo qiimaha maalgalinta Mashruuca Kanal Istanbul?
32. Immisa qof ayaa ka faa'iidaysan karta 3600 diyaarin dheeri ah oo muujinaya qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
33. Immisa gawaarida guryaha ah ayaa lagu samayn karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Canal Istanbul?
34. Immisa diyaaradood oo gudaha ah ayaa lagu samayn karaa iyada oo la raacayo qiimaha maal gashiga Mashruuca Canal Istanbul?
35. Iyada oo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, Immisa arday jaamacadeed la siin karo gunno ay kaga qaybgalaan safarada guriga (sanadkii hal mar) si ay naftooda u horumariyaan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan?
36. Iyada oo sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, imisa arday jaamacadeed la siin karo gunno ay kaga qaybgalaan socdaalada dibada (sanadkii hal mar) si ay naftooda u horumariyaan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan?
37. Kala badhka kirada, guriga, hoyga iyo ardayda ardayda jaamacadaha qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, gobolka ma laga bixin karaa?
38. Iyada oo kharashka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo imisa arday jaamacadeed kala bar biilka korontada ay bixin karto gobolka?
39. Immisa hooyo oo shaqeeya ayaa ku heli kara kaalmaynta xanaanada carruurta iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
40. Immisa qof ayaa loo shaqaaleysiin karaa iyadoo la siinayo gobolka maalgashi iyo shan sano oo mushahar ah oo Mashruuca Kanal Istanbul ay dowladdu bixiso?
41. Immisa hooyo oo shaqeeya ayaa ku heli kara kaalmaynta xanaanada carruurta iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
42. Immisa xarumood oo waxbarasho gaar ah ayaa lagu dhisi karaa iyadoo la maalgalinayo qiimaha maalgashiga Mashruuca Kanal Istanbul?
43. Immisa xarumaha waxbarashada dadweynaha ah ayaa lagu furi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
44. Immisa geedo daaweyn wasakh ah ayaa lagu abuuri karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
45. Immisa hoy oo xayawaan ah ayaa lagu dhisi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
46. ​​Immisa hoy oo xayawaan ah ayaa lagu dhisi karaa iyada oo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
Immisa hoy-guri ayaa lagu dhisi karaa iyada oo qiimaha maal-gashiga ee Mashruuca 47-aad ee Kanal Istanbul uu leeyahay 200 oo qof?
48. Immisa indha indheeyn ayaa lagu dhisi karaa iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
49. Immisa miinooyin ayaa lagu dhisi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
Immisa kilomitir ayaa lagu samayn karaa qiimaha maalgashiga 50. Mashruuca Kanal Istanbul?
51. Immisa kiiloo mitir oo laba jid ah oo la dayactirayo oo lagu cusbooneysiinayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa dayactir lagu sameyn karaa?
52. Immisa goobood oo qalabaysan ayaa lagu dhisi karaa iyada oo kharashka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
53. Immisa warshadood oo kiimiko ah ayaa lagu taageeri karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, iyo dhalashada iyo dhalashada sunta cayayaanka lagu heli karaa?
54. Immisa mashruuc oo TUBITAK ah ayaa lagu bixin karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
55. Immisa xarumood oo caafimaad oo buuxa ayaa laga furi karaa qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
56. Immisa tuulo ayaa tababaro xirfadeed lagu bixin karaa iyadoo lagu maalgelinayo kharashka maalgashiga Mashruuca Kanal Istanbul?
57. Immisa dugsiyo xirfadeed oo cusub ayaa la cusbooneysiin karaa iyadoo la raacayo shuruudaha da'da iyadoo lagu maalgelinayo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
58. Immisa daraasadood oo ku saabsan maadooyinka luqadda iyo taariikhda ayaa lagu taageeri karaa iyadoo la siinayo ilo la siiyo machadyada sida Machadka Luqadda Turkiga iyo Bulshada Taariikhda ah ee Turkiga iyada oo lagu maalgalinayo mashruuca Kanal Istanbul?
59. Qiimaha maal gashiga ee mashruuca Kanal Istanbul iyo shineemo, dokumentiyo iwm. Lagu horumarin karaa iyadoo la kaashanayo qaybaha warbaahinta sida?
Iyada oo qiimaha maalgashiga Mashruuca 60-aad ee Kanaalka Istanbul, Immisa muwaadiniin naafo ah la siin karo gaari batari ku shaqeeya iyo isgoyska albaabka guriga?
61. Immisa muwaadiniin curyaamiin ah ayaa la siin karaa qalabka gargaarka maqalka marka la eego qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
62. Baarkinka-bilaa-la'aanta ah waxaa lagu dhisi karaa sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, oo lagu qalabeeyay inta carruur waxbarashadda gaadhka ah ay horumarin karaan waxbarashadooda, khibradooda iyo xirfadahooda.
63. Kharashaadka maal gashiga ee Mashruuca Canal Istanbul iyo adeegyada dayactirka, waxyaabaha caafimaadka isticmaal ah iwm ee tirada dadka naafada ah. gobolka ayaa dabooli kara?
64. Immisa daaweynta jireed iyo dhaqancelinta ayaa lagu furi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
65. Immisa Xarumood oo Caafimaadka Maskaxda Bulshada lagu dhex furi karo iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
66. Immisa shaqaale ah oo ka shaqeeya dadweynaha ayaa la siin karaa tababar luqadda dhegoolaha ah oo la xiriira qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
67. Immisa bukaanno ah, oo muhiimad weyn leh iyo qarashka daawada, qalliinka, iyo daweynta ayaa bixin kara kharashka maalgashiga mashruuca Kanal Istanbul?
68. Immisa carruur ah oo ay tahay inay shaqeyso inkasta oo ay ka yar tahay da'da 18 oo leh kharashka maalgashiga ee mashruuca Kanal Istanbul ayaa sii wadan kara noloshooda waxbarasho markii lagu taageeray dhaqaale ahaan?
69. Kharashaadka maal gashiga ee mashruuca Kanal Istanbul, imisa qoys (2500 qof oo dakhli bil kasto ka hooseeya 4 lira) ayaa la kireysan karaa, gaaska dabiiciga ah, kaabayaasha korantada iyo biyaha?
70. Immisa haween ah ayaa ku jiri kara hoyga haweenka iyadoo ay ku kacayso kharashka maalgashiga ee mashruuca Kanal Istanbul?
71. Immisa nidaam nidaam xakamayn bay'adeed ayaa la abuuri karaa si looga hortago dhibaatooyinka deegaanka xagga kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
72. Magaalo intee le'eg ayaa lagu hubin karaa in mashruuca “Kala-saaridda Wasaqda ee Isha Isha” iyo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul uu rumoobay?
73. Immisa maal gashi ayaa lagu taageeri karaa deegaanka iyadoo ay ku jirto qarashka maal gashiga ee mashruuca Kanal Istanbul?
74. Immisa dhaqan-gal beereed oo waara ayaa lagu hirgalin karaa iyada oo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
75. Immisa xaaladood oo iskuullada isticmaalka teknolojiyadda lagu horumarin karo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo hirgalinta mabda'a fursadaha loo siman yahay ee waxbarashada (gaar ahaan tuulooyinka iyo miyiga)?
76. Iyada oo sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, Immisa muwaadiniin guri-laaweyaal ah ayaa loo dejin karaa si joogto ah?
77. Immisa ururro aan dawli ahayn oo u shaqeeya dadka hoyga laawaha ah ayaa lagu taageeri karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
78. Imisa daraasadood ayaa lagu taageeri karaa sidii loogu soo celin lahaa muwaadinintii guri la’aanta ahayd bulshada iyada oo lagu maalgalinayo kharashka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
79. Immisa dhismayaal taariikhi ah ayaa lagu soo celin karaa iyada oo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
80. Immisa dhismayaasha khatarta dhulgariirku waa la cusbooneysiin karaa iyadoo la maalgelinaayo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
81. Immisa mashruuc oo AFAD ah ayaa lagu maalgelin karaa qiimaha maal gashiga ee Kanal Istanbul Project?
82. Adeeg caafimaad oo bilaash ah ayaa lagu bixin karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ee imisa xayawaanaadka qalloocan?
83. Immisa arday ah oo u baahan caawinaad bulsho (by ÖSYM) iyo khidmadda imtixaanka ee mashruuca Kanal Istanbul ayaa bixin kara dowladda?
84. Immisa guryo bulsheed ayaa lagu dhisi karaa iyada oo kharashka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul (100 kun TL midkiiba)?
85. Immisa satalayt ah ayaa loo diri karaa meel sare iyadoo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
86. Immisa ganacsato ah oo raba inay ganacsi iyaga u gaar ah ka bilaabaan qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa heli kara taageero 50 kun TL ah?
87. Immisa Masaajid, ceevis, sunagogyada iyo kharashyada korantada ee kaniisadaha ayaa dabooli kara kharashka maalgashiga Mashruuca Canal Istanbul?
88. Immisa masaajidka, cemevi, sunagogyada iyo kululaynta kaniisadaha ay dabooli karaan qiimaha maalgashiga Mashruuca Canal Istanbul?
89. Immisa khadad tareen xawaare sare ah ayaa lagu dhisi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
90. Immisa tas-hiilaad qashin qubka oo lagu abuuri karo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
91. Immisa guryo xanaano oo leh hal boqol ayaa lagu abuuri karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
92. Immisa qoditaan iyo howlo cilmi-baaris ayaa lagu dardargelin karaa iyadoo la kordhinayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo miisaaniyadda loo qoondeeyo qodayaasha qadiimiga ah?
93. Immisa madxaf ayaa lagu dhisi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
94. Immisa tiyaatarro dawladeed ayaa lagu dhisi karaa iyadoo la maalgalinayo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
95. Immisa dab-demiyayaal ayaa lagu qori karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
96. Immisa mashruuc ayaa lagu taageeri karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo ka ilaalinta haweenka rabshadaha, xalinta dhibaatada guurka caruurta iyo kordhinta shaqooyinka haweenka?
97. Immisa labo-labo ah (shuruud ku xiran inay la kulmaan dhulka laftiisa) ayaa lagu rakibi karaa aqalka cagaaran ee hal-acre ah oo loogu talagalay qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
98. Immisa xanaano ayaa lagu furi karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
99. Immisa waaxood waxbarasheed ayaa ku taageeri kara hindisaha maalgashiga iyada oo la raacayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
100. Immisa xarumood oo R&D ah ayaa lagu abuuri karaa iyada oo kharashka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
101. Immisa mashruuc ayaa la fulin karaa iyadoo la kordhinayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul iyo R&D iyo Taageerada Xarunta Design?
102. Immisa tas-hiilaad tamarta dib loo cusbooneysiin karo ayaa lagu dhisi karaa iyada oo kharashka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
103. Immisa mashruuc ayaa lagu xaqiijin karaa iyada oo la kordhinayo dhiirigelinta ku saleysan qaybta IT iyada oo la maalgalinayo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
104. Immisa fasallo ah oo leh 20 arday ayaa la furi karaa si loo sameeyo nambarada Mashruuca Kanal Istanbul iyo koodh dhigista oo lagu bari karo cashar ahaan dugsiyada hoose?
105. Immisa mashruuc ayaa lagu taageeri karaa si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta dalxiiska iyada oo qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
106. Immisa mashruuc oo maal-gashi dhar-gashiga ah ayaa lagu maalgelin karaa qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
107. Immisa mashruuc oo maalgashi macdan qodis ah ayaa lagu maalgelin karaa qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
108. Immisa ilo oo raadiyaal, telefishan, qalab isgaarsiineed iyo aalado lagu maalgelin karo mashruuca maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
109. Miyaa laga heli karaa isha maalgelinta mashruuca Kanal Istanbul iyo soo saarista gawaarida hawada iyo booska?
110. Immisa mashruuc maal-gashi oo cagaaran ayaa lagu maalgelin karaa qiimaha maal gashiga ee Kanal Istanbul Project?
111. Ma laga heli karaa ilo mashruuc maalgashi oo ah Mashruuca Kanaalka Istanbul iyo soo saarida qalabka iyo mashruuca maalgashiga?
112. Immisa mashruuc oo maalgashi xaashiyaha waraaqaha ah ayaa lagu maalgelin karaa qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
113. Iyada oo sicirka maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul, kheyraadka lagu bixin karaa mashruuca duullimaadka?
114. Immisa shaqo-bixiyeyaal ah ayaa ku heli karaya taageerada mushaharka ugu yar ee hal sano ah qiimaha maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul?
115. Deeq ma la siin karaa si loogu taageero maalgashiga xoolaha ee dhowr dad oo ku kala nool gobollada hoos yimaada Mashruuca Koonfur-bari ee Anatolia iyadoo lagu maalgalinayo kharashka maalgashiga Mashruuca Canal Istanbul?
116. Immisa qof oo ku nool gobollada ay dabooleen Mashruuca Badda Madow ee Bariga oo ay ku maal gashan yihiin maalgashiga mashruuca Canal Istanbul ayaa la siin karaa deeq lagu taageerayo maalgalinta xoolahooda?
117. Immisa qof oo ku nool gobollada Mashruuca Konya Plain ayaa la siin karaa deeq si ay u taageeraan maalgashi xoolahooda?
118. Immisa qof oo ku nool gobollada mashruucu ka dhexeeyo ee mashruuca bariga Anatolia iyo kharashka maalgashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa la siin karaa deeq si ay u taageeraan maalgashi xoolahooda?
Tanrikulu ayaa ka codsaday ra'iisul-wasaaraha in dhacdada ka dhacday Istanbul Metro
MHP Ahmet Kenan Tanrikulu: Ogow tareenka tareenka dibada
Tanrıkulu ayaa TCDD weydiistay hanjabaad iyo hadal jireed
Tanrikulu, 3 laga bilaabo Taariikhda La Furay. Charge Isbedelka Isticmaalka
CHP Tanrikulu wuxuu ka codsaday Ra'iisul Wasaaruhu
CHP Tanrıkulu, YHT ayaa waydiisatay Golaha oo loogu talagalay dadka masuulka ka ah musiibada
Su'aalo ku saabsan CHPli Akkiraydan Metro
Dhibaatada Tram laga soo rarayo Tanrikulu leh MHP
Ogeysiinta Qandaraaska: Basmane - Afyon Line Km: Isbadal la taaban karo oo u dhexeeya 118 + 600 - 119 + 120…
Su'aalaha Metroboolka Kocaoglu: Sababtoo ah ogolaanshaha amaahda lama siinayo?
Daawashada Qorraxda on Mount Gods
Taageero ka timid Tanriverdi ilaa mashruuca garabka dhirta Spil
Qorraxda oo ku taal buurta Ilaah
Mashruuca Badbaadada Badbaadada Baddan
Qiimaha Channel TV
Mashruuca Kanal Istanbul
Qiimaha maal gashiga ee Mashruuca Kanal Istanbul
Sooal su’aal Kanal İstanbul
Mashruuca Mashruuca ee Konya
Xirfadlayaal dheeraad ah ayaa lagu magacaabaa sezgin tanrıkulu